no nidirany voalohany tao anatin’izay tontolo izay ary rehefa hitan’ny mpamokatra sarimihetsika fa mety aminy ilay milalao sarimihetsika dia nahazo fifanarahana tamina trano mpamokatra nalaza nanomboka tamin’izany fotoana ny tenany. Tsy nandalo fifantenana fa tao anatin’ny fitazonana ny anjara toerana mpilalao mpanampy no nahafahana nivoatra. Tokony ho tsara ny vokatra malagasy, raha ny eo amin’ny sarimihetsika, hoy izy, ary mahavelona raha tsy atao kitoatoa. Hita ho manomboka miha tsara aloha ny vokatra sarimihetsika eto Madagasikara, hoy izy, indrindra nony betsaka ny kiana azo. Efa misy trano mpamokatra goavana miara-miasa amin’ny antsika malagasy ankehitriny ary matoa ireny resy lahatra dia mahita izay fivoarana izay. Ao anatin’ny fanodinana ny sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe « Ikala pam’s 3 » ankehitriny ity mpanakanto ity. Vokatra izay iarahana amin’ny Avoko Production ary tohin’ny tantarana mpamosavy hita tao anatin’ny andiany 2 voalohany tamin’ny taona lasa izany, hoy ny fanazavany, ary maharitra ora iray sasany.